कांग्रेस चाैधाैँ महाधिवेशन : ‘शरीर यता शिरानी उता’ कृष्ण सिटौला ! « Nepal Bahas
कांग्रेस चाैधाैँ महाधिवेशन : ‘शरीर यता शिरानी उता’ कृष्ण सिटौला !
परिवर्तनको नाममा कांग्रेसलाई नाङ्गेझार पार्दै माओवादीको तावेदारीमा पु¥याएर आज बैशाखीको सहारामा मात्र हिंड्ने लङ्गडो कांग्रेस बनाउनमा यिनी पनि जिम्मेवार छन् !
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७८, सोमबार २२:४६
कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेशवादी, राप्रपा जति पनि पार्टी र टाठाबाठा नेताहरू छन्, ती सबैलाई एउटै सूचीमा राखेर मानिसहरू ‘विवेक र स्वाभिमान बेचेका प्यादा’ भन्ने गर्छन् । प्रा. लोकराज बराल, सीके लाल, कृष्ण हाछेथु, कृष्ण भट्टचन, आङ्काजी शेर्पा आदि ‘बुद्धि बेचेर जिउ पाल्ने’ (बुद्धिजीवी) हरूलाई पनि सोही कोटीमा राखेर हेरिन्छ ।
अहिले घन्काईएको एम्सीसीको विरोध र त्यसमा बीआरआई वालाहरूको संलग्नता र लगानीलाई बिर्सन मिल्दैन । मानव अधिकारवादी र कतिपय सञ्चारकर्मीहरू पनि त्यस्तो दलालको लिस्टमा नभएका होइनन् । यिनैमध्येका एक पात्रको बारेमा यहाँ चर्चा हुँदैछ । कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको प्रक्रिया चलिरहेको र एम्सीसीको विरोध घन्किरहेको यो बेला त्यस्तै एक खेलाडीको नालीबेली उतारिँदैछ, अर्थात कृष्णप्रसाद सिटौला ।
सार्वजनिक रुपमा यिनी जति हँसिला होउन्, तर घरभित्र भेट्न जानुहोस्, यिनको अनुहार ‘ठुस्स’ देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा जिल्लास्तरको एउटा नेता नाटकीय ढङ्गले केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेको उदाहरणका रुपमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई लिइन्छ । झापा जिल्लामा पार्टी राजनीति र वकालत पेशा गर्दैआएका यिनी ह्वात्तै केन्द्रीय राजनीतिमा छाए । एमाओवादीको हैसियत आज यतिको हुने थिएन, यिनले गृहमन्त्री भएर प्रचण्ड र बाबुरामलाई काँध नहालेको भए ।
एकताका यिनलाई पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा एमालेका रघुजी पन्तले तालीका गडगडाहटबीच ‘प्रचण्डको सवारीमन्त्री’ भनेका थिए । यता कांग्रेसतिर चाहिँ यिनलाई ‘सिलौटा’ भन्नेगर्छन् । यिनै सिटौला नयाँ संविधानको विवादास्पद मस्यौदा तयारी समितिका संयोजक भए, जुन संविधान यदुवंशबाट जन्मेको मुसल जस्तो हुन पुगेको छ, तथापि यिनी हाँसिरहेकै हुन्छन्, मानौं जे भइरहेको छ, हाँसिरहन लायक छ ।
हुन पनि ‘माओवादीका चरण–कमल’ का यिनी परम् ताबेदार भइदिए कि काँग्रेस कार्यकर्ताले माओवादीबाट चुटाई खाएर गृहमन्त्रीका रुपमा रहेका यिनलाई भेटेर भनसुन गर्न जाँदा चुटाई खानेलाई उल्टै हप्कीदप्की गरेर पठाउँने गर्थे यिनी । कांग्रेसभित्र यिनीमाथिको आक्रोश यति बढेको थियो कि आफु गृहमन्त्री भएर २०६४ को संविधानसभा चुनाब गराउँदा पनि यिनले झापामा एमाओवादीबाटै चुनाब हार्नुपरको थियो । काँग्रेस नेता चक्र बाँस्तोलाले गिरिजाप्रसादको निधनको तेह«ौँ दिनको ‘नागरिक’ विशेषांकमा भनेका थिए, “….वास्तबमा उहाँलाई माओवादीले हराएको होइन, माओवादीले त भोट दिएकै थियो । कांग्रेसीहरूले भोट दिएनन् र हार्नुप¥यो ।” २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा जान्ने भएर उम्मेद्वार हुने हुँदा उनी उठेको निर्वाचन क्षेत्रको लागि एमालेले राप्रपासँग तालमेल गरी राजेन्द्र लिङ्देनलाई एमालेले समर्थन गरेकोले यिनले हार्नुप¥यो ।
ब्रेन ह्यामरेज भएर ६ वर्षसम्म अचेत अवस्थामा रही २÷३ वर्षअघि निधन भएका कांग्रेस नेता चक्र बास्तोलाले दिल्लीमा बाह«बुँदे समझ्दारीपत्र गरेको सन्दर्भमा भनेका थिए, “२०६२÷६३ को जनआन्दोलनअघि सबै दिल्ली गएर बसे । मलाई पनि बोलाए । तर मैले दिल्ली जान अस्वीकार गरेँ । बरू झापा गएर बसेँ । त्यतिन्जेल मेरो गिरिजाबाबुसँग राम्रै सम्बन्ध थियो । तर, बाह«बुँदेपछि जब बालुवाटारमा बैठक हुन थाले, त्यसपछि हाम्रो दूरी बढ्दै गयो । त्यतिखेर गिरिजाबाबुसँग दूरी बढेको मेरोमात्र थिएन ।
कांग्रेसमा एउटा समुह नै थियो । हामीलाई माओवादीले गिरिजाबाबुलाई तानेर लगेजस्तो लाग्यो । गिरिजाबाबुलाई बालुवाटारमा रातारात (तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको षड्यन्त्रमा विवादास्पद) आठबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराए । त्यसपछि गिरिजाबाबुसँग ‘रिफ्ट’ नै भयो । पछि गिरिजाबाबुले मलाई फोन गरेर मलाई फोर्स गरे भने । हामीले गलत भयो भनेर स्ट््यान्ड लिन थाल्यौँ ।…..गिरिजाबाबुले भने कृष्ण सिटौलालाई लिन थाल्नुभयो । सायद भारतले एउटा विन्दुमा पुगेपछि यो प्रक्रियामा म संलग्न नभएको सजिलो मान्दोहो ।…..बाह«बुँदे सहमति भारतीयहरूले मस्यौदा गरेर दिएको मैले देखेको छु । पेन्सिलले लेखेर पठाएका थिए ।” उक्त आठबुँदे सहमतिबाट नै कांग्रेस माओवादीका अगाडि चुक्यो । स्मरणीय छ, सो समझ्दारीपत्रको मस्यौदाकार रञ्जीत रे नेपालका लागि भारतीय राजदूत भईसकेका र नेपालबारे हालै एक पुस्तक लेखेका व्यक्ति हुन् । चक्रको भनाईमा उनी इन्डियाको अराउपठाउ हुन नमानेपछि कृष्ण सिटौलालाई लिएका हुन् ।
सिटौला गृहमन्त्री भएकै अवस्थामा सुडानको शान्ति मिशनमा गएका नेपाल प्रहरीका १४० जना अधिकृत र जवानका लागि चाहिने हातहतियार, गाडी र अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भएको ४२ करोड रुपैयाँ बिगोको भ्रष्टाचारमा गृहमन्त्रीको नाताले यिनी अग्रपंक्तिमा परेका थिए । तर जालसाँजीपूर्वक बचाइयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउँदा यिनी लगायत तत्कालीन गृह सचिव उमेश मैनालीलाई जानीजानी छोडिदियो । अरूहरू परे । सुजाता कोइरालाका ज्वाईँ रुबेल चौधरी पनि मुछिएका थिए । उनलाई सिटौलाकै सक्रियतामा २०६८ असार १२ गते बाँग्लादेशतिरै भगाइयो ।
२०५० सालमा भएको झापा, काठमाडौं र रपन्देहीको प्रतिनिधिसभा उपचुनाबमा काठमाडौंमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाब हारे भने झापाका कृष्णप्रसादले चुनाब जितेका थिए । तर यिनको सांसद पद पाँच महिना पनि टिकेन, २०५१ साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनाब गराए । त्यसपछिका दिनमा उद्योग राज्यमन्त्री भएका सिटौला पछिल्लो जनआन्दोलनसँगै गृहमन्त्री भए । यिनका पालामा २१ दिने मधेस आन्दोलन भयो, जसमा ३८ जना मधेसीको ज्यान गयो ।
मधेसबाट यिनको राजिनामाको चर्को आवाज आयो, तर माओवादीको आसिर्वाद पाएका सिटौलालाई हठी गिरिजाले किन हटाउँथे । यही कारणले मधेसको जनमत भड्कियो र त्यसपछिको चुनाबमा मधेसबाट कांग्रेस नराम्रोगरी पछारियो । राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जनआन्दोलन दबाउँदा २१ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यही कारण ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासनमात्र त्यागेनन्, राजगद्दी नै त्याग्नुप¥यो । तर गणतन्त्रका नवनायकहरूको शासनमा त्यसको डबल नागरिकको ज्यान जाँदा पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु नपर्ने स्थितिले गणतन्त्रको नियत उजागर भएथ्यो ।
सिटौलाको गृहमन्त्रित्वमा नेपाली कांग्रेस २४० स्थानको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३७ स्थानमा मात्र विजयी भएको थियो । गृहप्रशासन यतिसम्म लथालिङ्ग र भद्रगोल भइसकेको थियो कि ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेर चौकहरू नै मोटर जामले ग्रस्त हुने गर्दथे । यो सबै माओवादीको ताबेदारी गरेर गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाउन गृहमन्त्री सिटौलाले गरेको करामत थियो । जब २०६४ सालको निर्वाचनमा पराजयले धराशायी भएको नेपाली कांग्रेस र चुनाब हारेको गृहमन्त्री सिटौला नेपाली समाजमा देखापरे, तबमात्र गिरिजा एण्ड सिटौलाहरूको घुच्चुकको बुद्धि अगाडि आयो तर त्यो बेला निकै ढिलो भइसकेको थियो ।
गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति होइन भएको प्रधानमन्त्री नै छोड्नुपर्ने, टार्न नमिल्ने नौबत आएको थियो । तेह«थुमको सक्रान्ति बजार वरिपरी सिटौलाहरूको राम्रै बस्ती छ । त्यहाँ एकातिर कांग्रेस बहुल बस्ती छ भने बजारको अर्कातिर कम्युनिष्ट नेताहरूको बाहुल्यता भएको बस्ती छ । बजारको अर्कातिरको पाखामा ‘कालिपा’का खड्ग ओली, ‘चोकपुर’का सीपी र राधाकृष्ण मैनाली, चुहानडाँडाका सूर्य कन्दङ्वा आदि कम्युनिष्ट नेता भए । तिनैमध्ये बजार नजिकै ‘ढाँडे सिटौला’ भनिएका हुनेखाने सिटौलाको परिवार पनि थियो, जो कालान्तरमा झापामा बसाई आयो । दाजु डिल्लीप्रसाद सिटौला स्थानीय त्रिमोहन हाईस्कूलमा मास्टर थिए । २०४८ सालमा उनी कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि बने । भाई कृष्ण सिटौला नेपाली कांग्रेसको मनोनित महामन्त्री बने ।
किसुनजीको नजिकको मान्छे भएर कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा खुट्टा टेकेका सिटौला कोइराला परिवारमा गिरिजाप्रसादका बफादार देखिए । त्यस बखत कोइराला परिवारमा बिहानको ४ बजेतिरै हुने पारिवारिक जमघटमा सिटौला पनि पुग्ने गरेको तर परिवारका सदस्यहरूलाई गिरिजाप्रसाद स्वयं नै भन्थे यो सिटौला वास्तबमा कसको मान्छे हो मलाई नै थाहा छैन । आजकाल ७० वर्ष कटेका सिटौलालाई बाह्रौं महाधिवेशनपछि महामन्त्री पदमा मनोनित गर्न ठीकठाक पारे पनि तत्कालीन बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबाले टाङ् अड्याइदिएपछि नवनिर्वाचित सभापति सुशील कोइराला अन्यौलमा परिरहेका थिए ।
त्यसै बीच भारतीय विदेशमन्त्री एस्.एम. कृष्णा नेपाल आएका बेला उनको ‘सल्लाह’ पछि देउबाले पनि अडान छोडेर र यिनलाई महामन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमा पार्टी सभापति पदको लागि भा.रू. मा उम्मेद्वारी लडेका सिटौलाको गुटमा गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान, उमाकान्त चौधरी रहेकोमा गगन त्यो गुटबाट बाहिर निस्केका छन् । परिवर्तनको नाममा कांग्रेसलाई नाङ्गेझार पार्दै माओवादीको तावेदारीमा पु¥याएर आज बैशाखीको सहारामा मात्र हिंड्ने लङ्गडो कांग्रेस बनाउनमा सिटौला पनि जिम्मेवार छन् ! दक्षिणको हावाअनुरुप चल्न यिनी खप्पिस छन, यद्यपि त्यसले उनलाई जतिसुकै विवादास्पद र बदनाम किन नबनाओस् ।